Xukuumadda Somaliland oo ku dhawaaqday in dalka ay ka jirto Xaalad Abaareed: Qorshe Rabbi-bari ah iyo Baaq Caalami ah | Somaliland.Org
February 26, 2008	Hargeysa (Somaliland.org) – Xukuumadda Somaliland ayaa maanta markii u horreysey ku dhawaaqday inay dalka ka jirto xaalad adag oo abaar iyo biyo la’aan ah.
Madaxweynekuxigeenka Somaliland, mudane Axmed Yuusuf Yaasiin oo madax u ah Guddi Madaxweyne Riyaale u magacaabay Abaaraha fadhigii shalay ee Golaha Wasiirrada ayaa shir jaraa’id oo uu maanta shir jaraa’id ku qabtay xarunta hay’adda ka hortagga Aafooyinka ee NERAD kaga dhawaaqay in dalka ay soo wajahdey xaalad abaar iyo biyo la’aan ah oo ku habtey gobolo badan oo dalka ah. Hase yeeshee, Madaxweynekuxigeenku waxa uu sheegay inta aanay u bandhigin xaaladda Beesha Caalamka iyo hay’adaha samafalka ay ka hormarinayaan qorshe Rabbi-bari iyo Duco ah oo dalka oo dhan laga fulinayo.
“Maanta waxaanu ku dhawaaqaynaa oo u dhawaaqaynaa beesha caalamka iyo hay’adaha caalamiga ahba in waddanka ay soo food-saartay Abaar,” ayuu yidhi Madaxweynekuxigeenku.
“Laakiin, anigu waxaan ka horraysiin arrin muhiim ah. Arrintaasi waxa weeye Illaahay wuxuu yidhi markay wax idin qabsadaan xagga Illaahay u yaaca,” ayuu raaciyey.
Waxana uu sheegay in masiibo ama dhibaato kasta oo ummad ku dhacda ay ka timaaddo dembi ummaddu gashay, sida keliya ee dhibaatadaa lagaga bixi karaana waxa uu sheegay inay tahay “Toobad” iyo Illaahay oo loo noqdo. Sidaa darteed, Madaxweynekuxigeenku waxa uu ugu baaqay shacbiga Somaliland inay toobad la yimaaddaan oo ay dembi dhaaf weydiistaan Eebbe.
“Marka hore waxaanu u diraynaa Gobolada dalka oo dhan marka ay belaayo timaaddo in horta xagga Rabbi loo cararo,” ayuu yidhi Madaxweynekuxigeenku.
Waxana uu tilmaamay tallaabooyinka la qaadayo iyo dariiqa loo marayo qorshahan Alla-bariga iyo Toobad keenka oo uu waajibiyey.
“Dabcan, marka xagga Illaahay loo cararayo Illaahay wuu sheegay. Waa saddex tallaabaa la qaadayaa. Mid waa ducadii oo ah in qof waliba uu ducaysto, toobadna Illaahay ugu noqdo. Ta labaad ee aanu ku amrayno gobolada dhammaantood iyo degmooyinkiisa iyo tuulooyinkiisa masaajiddada ka jira in la bilaabo Qunuuddii (Duco) alla-bariga ahayd ee salaadda dabadeeda. Salaad wal oo la gelayoba waxa laga dambaysiinayaa Qunuud oo ah Alla-bari,” ayuu yidhi Madaxweynekuxigeenku.
Waxana uu sheegay in ducadaa Qunuuddu ay bilaabmayso Arbacada, isla markaana ay soconayso ilaa Arbacada dambe, muddo 8 maalmood ah. Waxa uu sheegay in muddadaa gudaheeda haddii roobku di’I waayo in Khamiista dambe la samayn doono isu soo bax ballaadhan oo roob doon ah.
Dhinaca kale, waxa uu amray in maamulada goboladu ay soo diraan baaxadda ay le’eg tahay gobol kasta abaarta ka jirta, si loogu saleeyo ayuu yidhi, baaqa beesha Caalamka loo jeedinayo iyo codsiga ay hordhigi doonaan hay’adaha caalamiga ah oo uu sheegay inay isugu yeedhi doonaan dhowaan.